आर्थिक समृद्धि गर्न भवानी राणाका यस्ता छन् टिप्स, भाषणले मात्र देश बन्दैन | Chhinchhin Khabar
आर्थिक समृद्धि गर्न भवानी राणाका यस्ता छन् टिप्स, भाषणले मात्र देश बन्दैन
१० बैशाख २०७५, सोमबार ०८:३३
निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा उक्त संस्थाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला हुन् ।
देशका एकसे एक उद्योगी, व्यवसायी सदस्य रहेको महासंघलाई सर्वसाधारण र सरकारले आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने अंगका रूपमा लिने गर्छन् । महासंघमा तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट केन्द्रीय सदस्य हुँदै प्रवेश गरेकी राणाले एक दसकभन्दा बढी जिम्मेवारी तहमा बसेर अनुभव लिइसकेकी छन् । महासंघ अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदा यसबीचमा उनले संगालेका थप अनुभव के कस्ता रहे ? छिनछिन खबरलाई यसरी सुनाइन्ः
निजी क्षेत्रको संस्था उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । जिम्मेवारी कसरी वहन गरिरहनु भएको छ ?
महासंघमा मेरो लामो अनुभव छ । खाली पछिल्लो समयमा पदमात्र पदोन्नति भएको हो । एक दसक बढीदेखि महासंघको कुनै न कुनै पदमा रहेर काम गरिरहेकी छु । स्वभाविक रुपले अध्यक्ष भएपछि केही जिम्मेवारी पनि बढ्ने नै भए । यतिखेर सोही जिम्मेवारी अनुसार काम गरिहेकी छु ।
महासंघ यतिखेर केमा केन्द्रित छ ?
देश संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक संरचना के कस्ता हुने भन्नेबारे देशभरि बहस चलाइरहेका छौं । विभिन्न सुझाव आइरहेका छन् । मुख्यकुरा आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेकाले सहज भइरहेको छ ।
सरकारले भने अनुसार आर्थिक समृद्धि गर्न गाह्रो, सहज कस्तो छ ?
काम गर्ने हो भने गाह्रो भन्ने केही छैन । फेरि यतिखेर देशमा सबैलाई आर्थिक समृद्धि नै चाहिएको छ । नेपाल जस्तै अवस्था भएका देशले कैयन प्रगति गरिसके । दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि तीव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिरेहका छन् । नेपालमा भने अनेक बहानामा आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । भाषण मात्र गरेर आर्थिक समृद्धि हुँदैन ।
आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला त ?
आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालमा अनेक स्रोत, साधन छन् । तीमध्ये हाइड्रो, पर्यटन र कृषिलाई मात्र जोड दिने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि हुन गाह्रो छैन । जसका लागि दीर्घकालीन योजना, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनु पर्छ ।
तपाईं नेपालगन्जको स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । पुरानो सहर भइकन पनि पछिल्लो समयमा नेपालगन्जमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन नसकेको सुनिन्छ । यस्तो किन ?
नेपालगन्ज निकै सम्भावना भएको सहर हो । पश्चिम नेपालको आर्थिक केन्द्र हो । नेपालगन्जलाई कसैले चाहँदैमा पछि पार्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । हो, राजनीतिक रुपमा प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्न नेताहरू चुकेका छन् । स्थायी राजधानी तोक्ने काम भइनसकेका कारण नेताहरूले यसमा अझै प्रयास गर्नुपर्छ । नेपालगन्जलाई ५ नम्बर प्रदेशमै रहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । ६ नम्बर प्रदेशसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना छ भनेर बिर्सनु हुँदैन ।
विकासका लागि नेपालगन्जबासी अब उठ्नु पर्ने बेला आएको छ । सीमामा आइसिपी निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र पर्यटकीय केन्द्रको बनाउने काम युद्धस्तरमा तुरुन्त सुरु हुनुपर्छ । मानसरोवर र स्वर्गद्वारी दर्शन गर्नका लागि नेपालगन्जबाट ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ ।
Previous articleभारतको कोठीबाट नाबालिकासहित दुई नेपाली चेलीको उद्धार
Next articleअमेरिकामा फेरि बन्दुकधारीको आक्रमण, चारको मृत्यु
भरतपुरमा बम विस्फोट, भाटभटेनीमा क्षति
एलएलबीमा बढ्दो आकर्षण, अवकाशप्राप्त कर्मचारीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म भर्ना